Jereo ny tolo-kevitry ny ririnina Thinking Mu | Bezzia
Maria vazquez | 13/10/2021 18:00 | Inona no hotafiko
Tsy vao voalohany no niresaka momba ny Thinking Mu, a orinasan-damaody maharitra izay ny tanjony dia ny hitondra anjara biriky amin'ny fanjifana mailo sy miadana kokoa misy fiatraikany tsara amin'ny olona sy ny tontolo iainana. Ary tsy vao izao no asehonay anao ny volavolan-dalàna amin'ny ririnina izay miavaka amin'ny fomba milamina sy mahazo aina.
Ny akanjo avy amin'ny tsipika fako dia misongadina ao amin'ny fanangonana ririnina an'i Thinking Mu, a tetikasa fako aotra izay namboarina ny milina fanontam-pirinty namboarina avy amina fitaovana voaroba sy kofehy virijina maharitra. Ary tsy ho azonao atao ny manaisotra ny masonao amin'ny volavolan-kevitr'izy ireo sy ireo manana lamina miendrika miloko manga sy tja.
2 Ireo ilaina
Tianay ny paleta miloko nofidian'i Thinking Mu amin'ny fanangonana vaovao. Ary izany ve ireo anana, voasary, tile ary manga, Tonga izy ireo mba hanao ny fitafianay amin'ity vanim-potoana ririnina ity hanana endrika tsara sy falifaly kokoa. Ary ho anay, izay rehetra mametraka tarehy tsara amin'ny toetr'andro ratsy dia toa safidy tsara foana.
Rehefa mahita ny akanjo avy amin'ny fako, Mandray anjara amin'ny toekarena boribory amin'ny alàlan'ny fanodinana ampahany betsaka amin'ny fako vita amin'ny landy vita amin'ny akanjo taloha sy pulp hazo avy amin'ny ala maharitra maharitra, mora foana ny maka sary an-tsaina ny fahafaha-manome omen'ireo anao amin'ny andavanandronao. Ny akanjo mihosin-kofehy sy ny zipo midi elastika misy fehikibo elastika dia tsy isalasalana fa singa ankafizintsika indrindra.
Mora ihany koa ny manamarika ny akanjo corduroy landihazo organika avy amin'ny fanangonana: dungarees misy pataloha voapaika mahitsy, pataloha lava voditongotra, palitao denim, zipo fohy misy paosy efatra ... Akanjo izay mitambatra tanteraka amin'ny T-shirt Psycho sy ireo jumpers volon'ondry voamarina avy amin'ny katalaoginy.
Ary miaraka amin'ireo teo aloha dia tsy azontsika atao ny manonona ny akanjo vita amin'ny kofehy sy blouse misy tanany puff, tena mifanaraka amin'ny fomban'ny lamaody lamaody sy ny tsipika efa nitafy tamin'ny fahavaratra koa.
Tianao ve ny tolokevitra amin'ny ririnina Thinking Mu?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » lamaody » Inona no hotafiko » Jereo ny tolo-kevitra ririnina an'i Thinking Mu
Ahoana no ahafantarako raha marary ny saka?